Izakhamizi imibono yamakhamera agqokwa ngumzimba | Izixazululo ze-OMG
Izakhamizi imbono yamakhamera agqokwa ngomzimba
Amakhamera agqokwa ngomzimba kube yisihloko esishisayo njengoba ukuthunyelwa kwawo kwabonwa e-United States of America nase UK eminyakeni eyedlule. Abantu abaningi bangabaze iqhaza layo ekusizeni ukusebenza komthetho. Yebo, akungabazeki ukuthi lezi zinkambi zisize ukwehla kwezinga lobugebengu. Kepha abantu bacabangani ngalezi zinkambi nokuthi yini imibono yazo ngazo futhi kungumbuzo okufanele uzindle ngazo. Lo mbhalo uzofaka inothi lemininingwane kulokho imibono yesakhamuzi maqondana namakhamera agqokwa ngomzimba.
Imibono yezakhamizi zamakhamera agqokwa ngomzimba:
Amakhamera agqokwe umzimba (ngemuva kwalokhu ama-BWC) asetshenziselwa ukurekhoda ukuqoshwa komsindo kanye nevidiyo kokuhlangana phakathi kwamaphoyisa nezakhamizi. Eminyakeni yamuva nje, ama-BWC athunyelwe izinhlaka zamaphoyisa emazweni amaningi kubandakanya i-United States, Australia, kanye namazwe aseYurophu. Ama-BWC asetshenziswa kakhulu ukuvikela ukuziphatha okubandlululayo kwamaphoyisa kanye nokuhlangana okunodlame (okungukuthi, ukudutshulwa kwamaphoyisa okukhohlisayo kwezakhamizi), kukhuthaza izinga lokuxhumana phakathi kwamaphoyisa nezakhamizi, futhi kuthuthukisa ukwethenjwa kwezakhamizi namaphoyisa.
Umphumela wempucuko wabonwa emphakathini. Ucwaningo lukhombisa ukuthi mancane amathuba okuthi abantu babaleke bazi ukuthi bayaqoshwa. Ukuziphatha kwabantu kube noshintsho olukhulu emaphoyiseni ngemuva kokuthunyelwa kwama-BWC. Kube nokwehla okumangazayo kwezikhalazo ezibhekiswe ezikhulwini ebezigqoke amakhamera. Sikhuluma ngoku-oda ngamaphesenti angama-88 noma angama-90. Amaphoyisa mancane amathuba okuthi ahlanganyele ekuziphatheni okungenanhlonipho noma okungafanele, futhi izakhamizi mancane amathuba okuthi zibe nolaka futhi zimelane. Kuyaphawuleka ngempela lokho.
Inzuzo enkulu yokwethenjwa emaphoyiseni yabonwa eminyakeni yamuva. Njengoba amaphoyisa ebhekwa, abantu bazizwa bephephile bezungeza amaphoyisa. Amacala wokungaziphathi kahle kwamaphoyisa sehlile kakhulu. Amakhamera agqokwa ngomzimba abambe iqhaza elikhulu ekwakheni umthetho ongcono nokuhleleka okukuzungezile.
Ngesikhathi amaphoyisa ebhekwa ngokuqhubekayo, ukufumbathisa nezinye izindlela zenkohlakalo emnyangweni wamaphoyisa sehlile. Umphakathi ukuthole kuyinto ephumuzayo njengoba bengathola ukuthi izingqinamba zabo zixazululwe ngaphandle kokusebenzisa imali abayizuze kanzima njengofumbathiso.
Lezi zinto ziwubufakazi obunamandla bokuthi umphakathi uyawathanda la magajethi njengoba eqinisekisa nokuphepha kwawo ezempilo nemali. Ukuhlaziywa okuningiliziwe kombono wezakhamizi mayelana namakhamera agqoke umzimba wanikezwa nguMichael D. White, uNatalie Todak, uJanne E. Gaub.
Inhloso yaleli phepha bekuwukuhlola imibono yamakhamera agqokwa ngomzimba (ama-BWCs) ezakhamuzini ezake zahlangana namaphoyisa aqoshwe yi-BWC, nokuhlola ukuthi kungaba yini nomphumela ophumelelayo ekuziphatheni kwezakhamizi. Kusukela ngoJuni kuze kube nguNovemba 2015, ababhali baxoxisana ngocingo nezakhamizi ze249 eSpokane (WA) ababenengqungquthela yamaphoyisa e-BWC esanda kuqoshwa. Abaphenduli babenelisekile ngendlela abaphathwa ngayo ngesikhathi kuhlangana namaphoyisa futhi, bebonke, baba nezimo ezinhle ngama-BWC. Kodwa-ke, ngamaphesenti ama-28 kuphela abaphendulile abebazi i-BWC ngesikhathi sokuhlangana kwabo. Ababhali babuye bathola ubufakazi obuncane bomphumela wempucuko kepha babhala ukuxhumana okubalulekile nokuhle phakathi kokuqwashisa nge-BWC kanye nemibono ethuthukisiwe yezobulungiswa bokunqubo.
Amakhamera aseceleni kwamakhamera agqokwa ngumzimba - Ukwephulwa kwemfihlo
Ngokusobala, kunezikhathi lapho izakhamizi zilindela ukuba nobumfihlo okungaphulwa ngokusetshenziswa kwephoyisa kwekhamera egqoke umzimba - ingxoxo yengane, ingxoxo yalowo ohlukunyezwe ngokocansi, ngokwesibonelo. … Mhlawumbe iphoyisa likhuluma nempimpi eyimfihlo noma omunye umuntu ozama ukuthola ezobunhloli ngezenzo zobugebengu. Lapho lokho kuhlangana kuqoshwa, ezindaweni eziningi kuba yincwadi yomphakathi engacelwa yizakhamizi, ngabezindaba nakanjani ngabashushisi.
Kuyacaca ukuthi amaphoyisa nezinyunyana zamaphoyisa kazibamukelanga bonke lobu buchwepheshe. Banokukhathazeka mayelana nokuthi amakhamera azovulwa futhi acishwe nini, lapho abaphathi bengahamba bayohlola izithombe. Futhi-ke, mhlawumbe okubaluleke kakhulu, uzoligcina kanjani inani elikhulu lemininingwane yevidiyo ekhiqizwa izikhulu ezigqoke la makhamera?
Amazinga okufanele alondolozwe:
Kuhlala kuba nenkulumompikiswano ngokuthi amakhamera kufanele avuleke noma kufanele acishwe nini. Hlobo luni idatha okufanele bayiqoqe futhi luhlobo luni lwedatha okufanele balondoloze? Le mibuzo iyisivumelwano sangempela, ubumfihlo bezakhamizi akumele zephulwe okwamanje zonke izingxoxo kufanele zibhalwe phansi. Ngubani ongathola lokho kuqoshwa? Ingabe umshushisi angabusebenzisa lobu bufakazi enkantolo? Impendulo yakho konke lokhu ayikaphendulwa kuze kube manje. Abaphathi bezomthetho njengamanje basebenza kulokhu ukwenza umthetho olawula wonke umuntu. Ezinye zezindinganiso ezilandelwa njengamanje yilezi ezilandelayo:
Akunandaba, yiphi imigomo noma inqubomgomo eyakhelwe ukusetshenziswa kwamakhamera agqoke umzimba, into eyodwa okufanele abamele umthetho bayilandele ukuthi ubumfihlo bomphakathi akufanele bokwephulwa. Zonke izinto ezishiwo ngokuzethemba kufanele zihlale ziyimfihlo. Siyethemba ukuthi le mishini isiza amaphoyisa endawo nezinye izinhlaka zikazwelonke ukwakha umhlaba ngezinga lobugebengu elingaphansi.
Izakhamizi imbono yamakhamera agqokwa ngomzimba igcine ukuguqulwa: Septhemba 26th, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3136 Ukubuka kwe-3 Namuhla